IINGCAMANGO ZEGUMBI LEMIDLALO ENGAMA-60 YAMADODA-UYILO LOKONWABISA OLUKHAYA OLUPHOLILEYO - UYILO LWEKHAYA
Iingcamango zeGumbi leMidlalo engama-60 yamadoda-Uyilo loKonwabisa oluKhaya oluPholileyo
Akukho phedi ye-bachelor okanye umqolomba wendoda onokuthi uthathelwe ingqalelo uphelele ngaphandle kwegumbi lomdlalo elinobugcisa. Ukufikelela kubutofotofo bexesha elizayo ngexesha leseshoni yakho elandelayo yokudlala, uzakufuna itekhnoloji ye-state-of-the-art ecaleni kwezinto ezintle zoyilo lwangaphakathi.
Ngamava okudlala ngokungacacanga anokwanelisa wonke umntu, kuya kufuneka ukhethe izinto ezininzi ezikhoyo.
Ngokwendalo, kuphela zixhobo ezibalaseleyo ekufuneka zibonakalisiwe, kwaye oku kubandakanya zonke ezona zinto zintsha zangoku. Ewe amapulatifomu amadala anokuphoswa kumxube wesibheno esincinci se-retro. Khumbula, ezi nkqubo ziya kuphulukana ne-pizzazz yazo ukuba azihambisani nezikrini ezinkulu ze-HD kunye neenkqubo eziphezulu zezandi.
Ukwenza uthethathethwano luphelele, igumbi ngalinye lezemidlalo kufuneka lixhotyiswe ngeesofa eziphambili kunye neesolin zokuthambisa. Abanye abafana abanobuqili bakwacinezela umoya wabo wepati ngokubandakanya ibha epheleleyo enezitulo zeklasi kunye nekhawuntara yemabula. Imigangatho yehardwood iya kuphelisa ukubakho kwayo nayiphi na ingxaki ehlala ihleli; Okwangoku, zonke iingcingo kufuneka zifihlwe ngezinto ezintsonkothileyo kunye nekhabhathi. Gcina ukhumbula ukuba ukukhanya okuninzi kufuneka.
Ukongeza, ezinye zeendwendwe zakho zisenokungafuni ukuthatha inxaxheba kwimincili ye-arcade, ke kufanelekile ukuba zilungiselelwe ukhuphiswano lwezandla ngeebhiliyoni ze-foosball. Ungabandakanya neziko lokungcakaza elipheleleyo. Nalu ujongo lwangaphakathi kwinto efunekayo ukwenza igumbi lomdlalo we-suave elongezelelweyo!
izisombululo zokugcina phantsi kwezinyuko
Amaphupha amabi ngaphambi koyilo lwekrisimesi
I tattoo emnyama yokhozi emnyama nengwevu
ezakhiwe kwiishelufa ezinedesika
I tattoo yegxalaba yokugubungela izimvo
iinwele zamadoda ezinenwele ezinciphayo
uyithanda kanjani intombazana
ufihla njani umnyango
ithayile kwimibono yenguqu yeenkuni